musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Mamirioni eCCIDID-19 ekuyedza kits anorangarirwa muUSA
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Mamwe 2,212,335 kits akagadzirwa neAustralia-based biotech kambani Ellume uye akagoverwa muUS anogona kuratidza manyepo enhema SARS-CoV-2 bvunzo mhinduro.
US Federal Chikafu neDrug Administration inoburitsa kukurumidza kurangarirwa kweakanganisa COVID-19 kumba yekuyedza kits.
Anoyeukwa ekuyedza makiti epamba anoratidza 'yepamusoro-kupfuura-inogamuchirwa' yenhema yakanaka COVID-19 mhinduro.
Muedzo unoona mapuroteni econavirus, akatenderwa kushandiswa kwekukurumidzira neFDA gore rapfuura.
'Kirasi yandinorangarira' yemamiriyoni evakakurumbira nekukurumidza COVID-19 kits yekuongorora kumba yakapihwa neUS Federal Food and Drug Administration (FDA).
Maererano ne FDA, 'rudzi rwakanyanya kurangarira' rwakapihwa nekuda kwe2,212,335 COVID-19 test kits yakagadzirwa neAustralia-based biotech femu. Ellume, uye yakagoverwa muUS, inoratidza 'yepamusoro-kupfuura-inogamuchirika' yenhema yakanaka SARS-CoV-2 bvunzo mhinduro.
US federal regulator yakayambira kuti kushandiswa kwekiti dzisina kunaka "kunogona kukonzera hutano hwakakomba kana kufa."
Iyo antigen bvunzo, iyo inoona coronavirus mapuroteni, yakatenderwa kushandiswa kwekukurumidzira neFDA gore rapfuura. Inowanikwa pasina kunyorerwa kune vese vakuru nevana vane makore maviri zvichikwira, uye inoshandisa swab samples dzakatorwa kubva mumhino kuona kana munhu aine COVID-19.
Mamwe "majenya chaiwo," akagadzirwa pakati paFebruary naNyamavhuvhu gore rino, ave kurangarirwa muUS, kambani ichiti yakashanda nevakuru kubvisa nekuzvidira bvunzo dzakakanganisika pamusika.
Kambani yakakumbira ruregerero "nekuda kwekushushikana kana matambudziko [vatengi] angave akasangana nawo nekuda kwemhedzisiro yenhema."
Iyo 'yepamusoro-kupfuura-inogamuchirika' mhedzisiro, inoratidza kuti munhu ane coronavirus asi muchokwadi ivo vasina, yakashumwa kune FDA mune angangoita makumi matatu neshanu. Hapana mhedzisiro yakaipa yenhema yaonekwa.
Zvisinei, kuongororwa kusina kururama kunogona kuva nemigumisiro inotyisidzira upenyu. Munhu anogona kurapwa zvisizvo kana zvisina basa, kusanganisira nemishonga inorwisa utachiona hweHIV uye antibody, obva awedzera kurwadziwa nekuzviparadzanisa nevamwe vemhuri neshamwari.
Zvinogona zvakare kutungamira kune vanhu kusateedzera dziviriro, kusanganisira kubaiwa nhomba yeCCIDID-19, FDA yakataura.